နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > ရီစရာလေးများရဲ့စုစည်းတဲ့နေရာလေးပါ2
Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:52pm
Next One အများသုံး အိမ်သာတစ်ခုထဲ ၀င်ပြီး ကမုတ်ထဲထိုင်ရုံ ရှိသေးသည်။ ဟိုဖက်အိမ်သာထဲက လူက လှမ်းနှုတ်ဆက်သည်။ "ဟေ့လူ. နေကောင်းလား…" ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ အလ္လာပသလ္လာပ စကားပြောရတာ စိတ်မသက်မသာ ရှိလှသည်။ မကောင်းတတ်တော့လည်း ပြန်နှုတ်ဆက်ရသည်ပဲပေါ့. "ကောင်းပါတယ်. ကျေးဇူး" အသေအချာ အကျအနထိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိစ္စကို ဆက်ရှင်းမည် ကြံကာရှိသေး. အလိုက်မသိတတ်သော ငနဲသားက ထပ်မေးလာပြန်သည်။ "ခင်ဗျား ဘာတွေ အလုပ်ရှုပ်နေလဲဗျ." ဟာ… ဒီလူတော့ ခက်ပြီ. ဘာလဲကွာ… ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလို ဂွတီးဂွကျမေးခွန်းတွေ လာမေးနေတာ ဘာလဲ…. စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့် ဘုတောပစ်လိုက်သည်။ "ခင်ဗျားလိုပဲပေါ့ဗျာ." ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်လက်စသတ်ပြီး ထွက်သွားဖို့ စိတ်ကူးလိုက်သည်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု ထပ်ထွက်လာပြန်သည်။ "ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ဗျာ. ရမလား" ဗုဒ္ဓေါ……. ဒီလူ ဘယ်လိုလူလဲ. ဂေးလား. ဂျော်ရကီးလား. ဘာကောင်လဲကွာ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. ကိုယ်ကျင်လည်ကျက်စားနေရာ နေရာမဟုတ်၍ သတိတော့ ထားနေရသည်။ ထောင်းခနဲ ထွက်လာသော ဒေါသကို အသာချိုးနှိမ်လျက် အသံ ခပ်အုပ်အုပ်ဖြင့် ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ "မလုပ်နဲ့လေဗျာ. ကျွန်တော်လည်း ဒီမှာ အလုပ်ရှုပ်နေတာ.." ဒုန်းခနဲ တံခါးဆောင့်ပိတ်သံ ကြားလိုက်ရပြီး ဟိုဖက်က ပြန်ပြောသည်။ "နောက်မှပဲ ပြန်ဆက်တော့မယ်. ဟိုဖက်အခန်းထဲက သောက်ပေါတစ်ကောင်က ရူးသလို နှမ်းသလိုနဲ့ ငါမေးသမျှ ပြန်လိုက်ဖြေနေလို့…."
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:54pm
သီချင်း Cho: လင်ယူမယ်.. လင်ယူမယ်..အမေရယ် ဒီဝါကျွတ်ရင် သမီးတော့ယူမယ်... သူ့ မှမရရင်ကွယ် ဆွဲကြိုးချသေမယ်... အမေရယ် မြန်မြန် သာပေးစားပါကွယ်.......... Ves: အမေ့ ရဲ့ သမက်ဟာ သင်္ဘောသား ဒလနဲ့ ရန်ကုန်ကုန်ကူးနေတယ်... အမေရယ် သိများသိနေမလား...ကိုတုပ်ကြီးရဲ့သားပါကွယ်......
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:56pm
အကြောင်းကို စဉ်းစားပေးပါ ဟာသလေးက နည်းနည်းရိုင်းသွားရင် ခွှင့်လွှတ်ပါ။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်း ယောင်္ကျားလေးတွေက ဘာလို့ အတောင် ၂၀ လုံချည် ၀တ်ကြရတာလဲ။ သူငယ်ချင်းတို့ ထင်တာကို ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီမပေါ်သေးလို့ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်။ သူတို့ ပုဆိုးဝတ်ရင် အရှေ့မှာ က ပိုများလို့ပါ။ ဟီးဟီးထင်တာ ပြောတာနော်။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:57pm
အစွမ်းထက်ဆေး တစ်ခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ ကဝေမကြီးတစ်ယောက် သောင်းကျန်းနေပါရော။ အဲ နောက်တစ်ရွာမှာတော့ လူတစ်ကာကို လိမ်စားနေတဲ့ ဘိန်းတောဆရာတစ်ယောက် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့လိမ်ကွက်တွေက ပီပြင်လွန်းတော့ အားလုံးက အဟုတ် ထင်နေကြတယ်။ အဲ့ဒိတော့ ကဝေမကြီးကို ဆုံးမဖို့ တာဝန်က သူ့ အပေါ်ကျလာတယ်။ သိက္ခာအကျ မခံချင်တဲ့ ဘိန်းတောဆရာဟာ သူ့တပည့်ကို ခေါ်ပြီး အဲ့ဒိရွာကို ထွက်လာတယ်။ သူ့ အကြောင်းကိုသိတဲ့ သူ့တပည့်က မယုံတယုံနဲ့ လိုက်လာတယ်။ သူ့ ဆရာကတော့ " ငါဆေး ၃ လုံး ဖော်စပ်ထားတယ် လုံးဝကြောက်စရာမလိုဘူး " လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ရွာထိပ်ရောက်လာပါရော။ ရွာထိပ်မှာပဲ ကဝေမကြီးက သူတို့ကို အသင့်စောင့်နေတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ဘိန်းတောဆရာက ပထမ ဆေးတစ်လုံးနဲ့ ပစ်တယ် ကဝေမ က ရယ်တယ်။ ဒုတိယဆေးနဲ့ ထပ်ပစ်တယ်။ ဒါလည်းဘာမှ ဖြစ်မလာဘူး။ ဒါပေမယ့် တတိယဆေး နဲ့လည်းပစ်ရော ကဝေမပြာကျသွားတယ်။ အဲဒိတော့မှ သူ့တပည့်က သူ့ဆရာကို အထင်ကြီးတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ " ဆရာ အဲ့ဒါ ဘာဆေးလဲ "လို့ မေးတယ်။ သူ့ဆရာ က ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲ ဆိုတော့ " ဟေ့ကောင် ငတုံးရ အဲ့ဒါ ဆေးမဟုတ်ဘူး လက်ပစ်ဗုံးကွ " ဟု ပြောလိုက်လေသည်။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:59pm
Ah Beng... အာဘန်းတစ်ယောက် မိုဘိုင်းဖုန်း အသစ်တစ်လုံးဝယ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ သူတွေအားလုံးဆီကို Message ပို့လိုက်ပါတယ်။ “ကျွန်တော့် ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းသွားပါပြီ။ အရင်က Nokia 3310 ပါ။ အခုတော့ 6610 ဖြစ်သွားပါပြီ။” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- အာဘန်း ~ “ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့သားက ဆေးတက္ကသိုလ်မှာလေ” မိတ်ဆွေ ~“ဟုတ်လား။ သူက ဘာတွေ လေ့လာနေတာလည်းဗျ” အာဘန်း ~ “သူကလေ့လာနေတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ လုတွေက သူ့ကို လေ့လာနေကြတာ” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- အာဘန်း ~ “ဆရာရယ် ကျွန်တော်လေ ညတိုင်း ဘောလုံးကစားနေတယ်လို့ အိပ်မက်မက်နေတယ်” ဆရာဝန် ~ “ဒီဆေးလေးသာ သောက်လိုက်ပါ။ ခင်ဗျား အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်” အာဘန်း ~ “မနက်ဖြန်မှ သောက်လို့ရလား ဆရာ။ ဒီညက ဖိုင်နယ်ပွဲမို့ပါ” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- အာဘန်း ~ “ငါသေရင် မင်းနောင်အိမ်ထောင်ပြုမှာလား မိန်းမ” အာဘန်းရဲ့ဇနီး ~ “မပြုပါဘူးရှင်။ ကျွန်မညီမနဲ့ပဲ သွားနေတော့မှာပေါ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်မသေရင်ရော ရှင်နောက် အိမ်ထောင်ပြုမှာလား” အာဘန်း ~ “ငါလည်း မပြုပါဘူးကွာ။ ငါလည်း မင်းညီမနဲ့ပဲ သွားနေတော့မှာပေါ့” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- အာဘန်းက ရဲအရာရှိကိုတိုင်ကြားနေပါတယ်။ “ရဲအရာရှိကြီးရယ် ကျွန်တော့်အိမ်မှာ TV ကလွဲလို့ တခြားဘာပစ္စည်းမှ မကျန်တော့ဘူး” ရဲအရာရှိ ~ “သူခိုးက TV ကိုတော့ ဘာလို့များ ယူမသွားပါလိမ့်” အာဘန်း ~ “ကျွန်တော်က TV မှာပြတဲ့သတင်း ကြည့်နေတာကိုး” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ကျောင်းနေတုန်းကအချိန်တွေမှာ အာဘန်းကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အမှတ်ရနေပါသလဲ? အားဘန်းဟာ ဆရာမ ကျောက်သင်ပုန်းကို ဖျက်တိုင်း သူ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲက စာတွေကို ခဲဖျက်နဲ့ လိုက်ဖျက်ပစ်တတ်တဲ့သူပေါ့။ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- အာဘန်းဟာ ဘားဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာ ထိုင်နေတုန်း သူ့ဆယ်လူလာဖုန်းက မြည်လာပါတယ်။ သူက ကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး “ဟယ်လို ငါ ဒီမှာရှိနေတာကို မင်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲဟင်” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- အာဘန်း ~“ဘာလို့အဲဒီလူတွေအားလုံး ပြေးနေကြတာလည်း” ဘေးကလူ ~ “ဒါပြိုင်ပွဲလေ။ နိုင်တဲ့သူက အဲဒီဆုဖလားကို ရမှာပေါ့” အာဘန်း ~ “နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ အဲဒီဆုဖလားကိုရမှာကိုများ တခြားလူတွေက ဘာလို့များ ပြေးနေကြတာလည်း” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- အာဘန်းကသူ့ရဲ့အစေခံလေးကို ပြောလိုက်ပါတယ် “ပန်းပင်တွေ ရေသွားလောင်းစမ်း” အစေခံလေး ~ “အပြင်မှာ မိုးတွေရွာနေပါပြီ ဆရာ” အာဘန်း ~ “အဲဒါဘာဖြစ်လည်း။ ထီးယူပြီး သွားလေ...” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 10:00pm
အီးပေါက်ကြသူများအကြောင်း > > ၁။ ယဉ်ကျေးသူ ………………..အီးမပေါက်ခင် "ခွင့်ပြုပါနော်" ဟုပြောပြီး အီးပေါက်ပြီးသောအခါ "ဆောရီး" ဟုပြောတတ်သူ။ > > ၂။ မရိုးသားသူ………………….ကိုယ်ကအီးပေါက်သော်လည်း ၀န်မခံပဲ "ကျွန်တော့်ခွေးလက်ချက်ပေါ့" ဟုလွှဲချတတ်သူ။ > > ၃။ မိုက်မဲသူ…………………….အီးပေါက်ချင်သော်လည်း မပေါက်ပဲ အံတင်းကြိတ်မှိတ် အောင့်ထားသူ။ > > ၄။ ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူ………ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာတွင် အီးပေါက်ရမလဲ သိသူ။ > > ၅။ ဒုက္ခသည်…………………..အီးအလွန်ပေါက်ချင်သော်လည်း ပေါက်၍ မရနိုင်ပဲ အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေသူ။ > > ၆။ အုံ့ပုန်း………………………လက်သည်မပေါ်အောင် (သို့) သူ့လက်ချက်မှန်း ဘယ်သူမှမသိအောင် အီးပေါက်သူ။ > > ၇။ ၀ါကြွားသူ………………….အီးကျယ်ကျယ်ပေါက်ရခြင်း၌ ဂုဏ်ယူတတ်သူ။ > > ၈။ နှိပ်စက်တတ်သူ………….လူများသောနေရာတို့တွင် ရွေးပြီး အီးပေါက်သူ။ > > ၉။ သိပ္ပံဆရာ…………………အီးမှန်မှန်ပေါက်သော်လည်း လေထုညစ်ညည်းမှာကို စိုးရိမ်သူ။ > > ၁၀။ ရှက်တတ်သူ……………အီးပေါက်ပြီး မျက်နှာ တစ်ခုလုံး နီရဲလာသူ။ > > ၁၁။ အကြံပိုင်သူ…………….အီးပေါက်သော်လည်း သူ၏ အီးပေါက်သံကို သူတစ်ပါးမကြားစေရန် အာလူးကျော် (၀ါ) ငါးမုန့်ကျော် ကိုတစ်ကျွတ်ကျွတ်ဝါး၍ အီးပေါက်သူ။ > > ၁၂။ ကျပ်မပြည့်သူ…………အီးပေါက်လိုက်လို့ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက လေတွေ လျှော့သွားပြီဟု ထင်မှတ်လျက် Balace ဖြစ်အောင် လေကိုတစ်ဝကြီး တစ်ရှူးရှူး ရှူသွင်းတတ်သူ။ > > ၁၃။ ကပ်စေးနဲသူ………….အီးကို အကုန်တစ်ချိန်ထိုး မပေါက်ပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း တစ်ဆစ်ချင်း ညှင်း၍ပေါက်သူ။ > > ၁၄။ အတ္တကြီးသူ………….ငါ့အီး တယ်မွှေးပါလား ဟုယုံကြည်သူ။ > > ၁၅။ အပေါင်းအသင်းချစ်သူ…သူတစ်ပါးတို့ အီးပေါက်ခြင်းကိုလည်း နှစ်သက်သူ။ > > ၁၆။ အပေါင်းအသင်းမချစ်သူ…….ဆိတ်ကွယ်ရာသို့ သွားပြီးမှ အီးပေါက်သူ။ > > ၁၇။ ဇိမ်သမား………………ရေချိုးကြွေဇလုံတွင် ရေစိမ်ချိုးရင်းအီးပေါက်သူ။ > > ၁၈။ အားကစားသမား……ပင်ပင်ပန်းပန်း အားမစိုက်ရဘဲ အီးပေါက်နိုင်သူ။ > > ၁၉။ ဆဌမအာရုံရှိသူ….အသံကြားရရုံဖြင့် ဘယ်သူအီးပေါက်သလဲဟု ဖေါ်ထုတ်နိုင်သူ။ > > ၂၀။ စိတ်ပျော့သူ……….အီးပေါက်ရန်ကြိုးစားရင်း ချီးယိုသူ။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 10:01pm
JOKE 10 myanmar မင်းဘယ်မှာနေလဲ မျက်စိလည် လမ်းမှားပြီး ဘယ်သွားရမှန်းမသိ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေသော ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို တာဝန်ရှိသူများက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြရပြီး ကလေးငယ်ကို နေအိမ်ပြန်ပို့ပေးနိုင်ရန် လိပ်စာကို ကြိုးစား စစ်မေးနေကြသည်။ တာဝန်ရှိသူ။ ။ "" မင်းဘယ်လမ်းထဲမှာ နေသလဲ"" ကလေးငယ်။ ။ "" လမ်းထဲမှာ မနေပါဘူး၊ အိမ်ထဲမှာ နေပါတယ် "" ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားလိုက်လေသည်။ ကျိုးပျက်စရာဆိုလို့ မိခင်တစ်ဦးသည် ကောလိပ်တက်နေသော သားတော်မောင်ထံ သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ် ပို့ပေးလိုသည့်အတွက် စာတိုက်သို့ ရောက်လာသည်။ စာတိုက်စာရေးဖြစ်သူက ပေးပို့မယ့် ပါဆယ်ထုပ်ထဲမှာ ကျိုးပျက်စရာ ပါ မပါ မေးမြန်းသည်။ "" ကျိုးပျက်စရာဆိုလို့ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးပဲပါတယ်"" ဟု သူမက ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ ဒါဆို လိမ်တာပဲ သာလိကာကို သင်တန်းပေးပြီး စကားပြောသင်နေသူသည် သာလိကာအား "" ငါလမ်းလျှောက်တတ်တယ် "" ဟု သင်ပေးရာ သာလိကာက "" ငါလမ်းလျှောက်တတ်တယ်"" ဟု ပြန်ဖြေခဲ့သည်။ ဆရာ။ ။ "" ငါစကားပြောတတ်တယ် "" သာလိကာ။ ။ "" ငါစကားပြောတတ်တယ် "" ဆရာ။ ။ "" ငါပျံသန်းနိုင်တယ် "" သာလိကာ။ ။ "" ဒါဆိုလိမ်တာပဲ အတောင်ပံချိုးထားတယ် "" ဟု ပြန်ပြောခဲ့လေသည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုတည်း ကျန်လို့ပါ အမြန်ရထားဖြစ်သည့် အတွက် ဘူတာတိုင်းတွင် အချိန်ကြာကြာ မရပ်ပါ။ ကျွန်မသည် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ ကလေးငယ်တစ်ဦးအား "" အန်တီ့ကို ကူညီပြီး သကြားပလာတာနှစ်ချပ် ၀ယ်ပေးပါ၊ တစ်ချပ်က သားစာ၊ တစ်ချပ်ကို အန်ှတီ့ကို ပေးပါ "" ဟုပြောပြီး ငွေတစ်ဆယ်ပေးကာ ၀ယ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ကလေးငယ်သည် ပလာတာတစ်ချပ်ကို ကိုက်စားပြီး ကျွန်မအား ငွေငါးကျပ်ပြန်ပေးရင်း "" နောက်ဆုံးတစ်ချပ်တည်း ကျန်တယ် အန်တီရယ်"" ဟု ပြန်ပြောခဲ့သည်။ ငါ့တာဝန်ကျေပြီ စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှ ထွက်ခွါလာသော အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးသည် ငွေသိမ်းစာရေးအား ပြန်အမ်းငွေ မှားနေကြောင်း ပြန်လာပြောပြခဲ့သည်။ စာရေးကမူး "" ကောင်တာမှ မထွက်ခွါမီ စစ်ဆေးယူပါ၊ ကောင်တာမှ ထွက်ခွါပြီးနောက် မှားယွင်းမှုကို တာဝန်မယူ "" ဟူသော ဆိုင်းဘုတ်ကို ညွှန်ပြလိုက်သည်။ သည်တွင် အမျိုးသမီးကြီးမှ "" ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပဲ၊ ငါ့တာဝန်ကျေပြီ၊ ငွေငါးရာ ပိုအမ်းလိုက်တော့ ငါမုန့်ဝယ်စားရတာပေါ့ "" ဟု ပြောဆိုရေရွတ်လိုက်ပြီး ဆိုင်မှ ထွက်ခွါသွားလေသည်။ အရည်အချင်းတစ်ခု လူတစ်ယောက် သူ့သူငယ်ချင်းအား "" ငါဝန်ကြီးချုပ်နေရာ ၀င်အရွေးခံမလို့ကွ "" ဟု ဖွင့်ဟ ကြေညာလိုက်ရာ သူ့သူငယ်ချင်းက အံအားသင့်သွားပြီး "" မင်းရူးနေသလား "" ဟု မေးလိုက်၏။ သည်တော့ ထိုသူက "" ဘာလဲ၊ ရူးဖို့လိုလို့လား "" ဟု ပြန်ဖြေလိုက်၏။ အထင်မခံနိုင်ပေါင် ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းလာခဲ့သည့် အမျိုးသမီးကြီးက ဂရိရှေးဟောင်း ဘုရားကျောင်းပျက်ကြီး၏ ပြိုလဲကျနေသော တိုင်ကြီးများရှေ့တွင် ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံ၏။ "" ဓါတ်ပုံထဲမှာ ကားမပါစေနဲ့နော်၊ တော်ကြာ ယောက်ျားက ဒီနေရာကို ကျွန်မ၀င်တိုက်လိုက်တာလို့ ထင်သွားအုံးမယ် "" ဟု အချိန်မီကလေး သတိလှမ်းပေးလိုက်၏။ လစာမြင့်လို့ပါ လူကြီး။ ။ "" ဦးက ဒီနေရာနဲ့ စိမ်းနေလို့ပါကွယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး အနီးဆုံးဘဏ်ကို မင်း ညွှန်နိုင်မလား"" ကလေးငယ်။ ။ "" ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ဆယ်ဒေါ်လာတော့ ပေးရမယ် "" လူကြီး။ ။ "" ဟ..များလှချေလားကွ....မင်း တောင်းတာ ... ကလေးငယ်။ .။ "" ဘဏ်ညွှန်ကြားရေးမှူးတွေဆိုတာ လစာမြင့်တယ်ဗျ.."" ဒီလိုပါ ဒီလိုပါ ခြံထဲတွင် ကစားနေသော ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ၏ လေးနှစ်အရွယ်သားငယ်လေးက သူ၏နားထဲသို့ ကျောက်ခဲဝင်သွားကြောင်း ပြောလေရာ မိတ်ဆွေသည် ထိုကျောက်ခဲကို ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် ကလေးအား ဆေးရုံသို့ အပြေးအလွှား ခေါ်သွားရလေသည်။ ဆရာဝန်က ထိုကျောက်ခဲအား ညင်သာချောမွေ့စွာ ထုတ်ယူပေးလိုက်ရာ "" ဘယ်လိုများ ဒီကျောက်ခဲ နားထဲ ၀င်သွားရတာလဲ "" ဟု ဆရာဝန်က ကလေးကို မေးလိုက်သည်။ "" ဒီလိုပါ "" ဆိုပြီး ကလေးငယ်က ကျောက်ခဲကို သူ၏ နားထဲသို့ ပြန်ပြီး ထိုးသွင်းပြလိုက်သည်။ သူသည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မေ့ဆေးပေးခံရပြန်တော့သည်။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 10:03pm
From Forward Mail လေယာဉ် ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာ ထိုင်၍ လိုက်ပါလာသူ ခရီးသည်တစ်ယောက်သည် တရွေ့ရွေ့လျားနေကြသော တိမ်စိုင်တိမ်ခဲကြီးများကို ကြည့်ရင်း အလွန်ကြည်နူးနေလေသည်။ ထိုစဉ် သူ့ပြတင်းပေါက်ရှေ့မှာ လေထီးသမားတစ်ဦးကို မြင်လိုက်ရ၏။ လေထီးသမားက `ဘယ်လိုလဲ၊ ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်ခဲ့မလား´ ဟုလှမ်းမေး၏။ ဒီတော့ ခရီးသည်က `ကျေးဇူးပဲ၊ မလိုက်တော့ပါဘူး။ တိမ်တွေကို ခုလိုကြည့်နေရတာ သိပ်အရသာ ရှိတယ်´ `ကောင်းပါလေ့ဗျာ။ ကျွန်တော်က တခြား လူမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားစီးနေတဲ့ လေယာဉ်ပျံကြီးရဲ့ လေယာဉ်မှူးပါ။ ကဲသွားပြီ၊ တာ့တာ´ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ပထမ အလုပ်သမား ။ ။ `ခင်များသူဌေး ရဲ့ အသုဘကို သွားဦးမလား´ ဒုတိယအလုပ်သမား ။ ။ `မသွားဘူးဗျာ…ကနေ့ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်လိုက်ဦးမယ်။ ကျွန်တော့်ဆောင်ပုဒ်က အလုပ်ပထမ၊ပျော်စရာက ဒုတိယလေ´ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ဘ၀မှာ..အဆိုးရွားဆုံးအရာ (ပြည့်ဖြိုး) အမေ..သူ့သမီးအခန်းကိုဖြတ်သွားစဉ်..အိပ်ရာခင်းကို..သပ်သပ်ရပ်ရပ်ခေါက်ထားပြီး.. အားလုံးသန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတာမြင်တော့အံသြသွားသည်.. အိပ်ရာဘေးက..မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ..စာအိတ်တခုထောင်ထားတာတွေ့သွားသည်။.. အမေသို့..လို့ရေးထားသည်..။ သူမ..တုန်လှုပ်စွာဖြင့်..စာအိတ်ကိုဖောက်ပြီး..စာကိုဖွင့်ဖတ်လိုက်သည်...။ အမေ သမီး..ဒီစာကိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာ..အရမ်းလည်းနောင်တရတယ်..၀မ်းလည်းနည်းတယ်..။. ..သမီး..သမီးရည်းစားနဲ့..ခိုးရာလိုက်သွားပြီ..အမေ...သမီးတော့..တကယ့်ကိုသမီးချစ်တဲ့လူကိုတွေ့ပြီ. ..သူက..သူရဲ့နားကွင်း..ဆေးမင်ကြောင်..နဲ့ သူဝတ်တဲ့..အ၀တ်အစားနဲ့..တကယ်ကိုပဲကြည့်လို့ကောင်းတယ်..။... ဒါပေမဲ့..သမီး..သူ့နောက်လိုက်သွားတာ..ဒါတခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး..အမေ. .သမီးမှာ..ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ..။..သူကပြောတယ်.သမီးတို့ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နေကြရမှာတဲ့..။.. တောထဲမှာ..သူပိုင်တဲ့..တဲလေးရှိတယ်တဲ့..။ သူက..သမီးနဲ့အတူ..ကလေးတွေအများကြီးလိုချင်တယ်တဲ့....။. သူကသမီးတို့..ဆေးခြောက်တွေ..ကိုကင်းတွေကိုစိုက်ပြီး..အသက်မွေးကြမယ်တဲ့လေ..။. ..အဲဒီ့အချိန်အတွင်းမှာ..သမီးတို့..အေအိုင်ဒီအက်စ်ကို..ကုလို့ရမယ့်. .ဆေးပေါ်လာပါစေလို့..ဆုတောင်းမယ်..ဒါမှ..သမီးရည်းစားမြန်မြန်သက်သာမှာ..။ သမီးတို့အတွက်..စိတ်မပူပါနဲ့အမေ..။..သမီးက..အခုဆို..၁၅နှစ်တောင်ရောက်နေပြီ. .ကိုယ်ကိုယ့်ကို.ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာ..သမီးသိပါတယ်..။ တနေ့နေ့ကြရင်..အမေတို့ဆီ..သမီးတို့ပြန်လာပြီး..အမေ့မြေးလေးတွေကို..လာပြမှာပါ.. အမေ့ရဲ့..သမီး .. ဂျူလိုင်. . PS:အမေ..အပေါ်မှာရေးထားတာတွေ..တခုမှ..မဟုတ်ဘူးသိလား..။. .သမီးအခု..သမီးသူငယ်ချင်းအိမ်မှာ..။...ဘ၀မှာ..သမီးမှန်တင်ခုံပေါ်က.အံဆွဲထဲက. report cardထက်..ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့..အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာ. .သိစေချင်လို့ပါ..။. .သမီးအိမ်ပြန်လို့..စိတ်ချရပြီးဆိုရင်..သမီးဆီဖုန်းဆက်လိုက်နော်......။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 10:04pm
Forward mail ကရတာပါ အကိုတို့ မင်းဘယ်မှာနေလဲ မျက်စိလည် လမ်းမှားပြီး ဘယ်သွားရမှန်းမသိ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေသော ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို တာဝန်ရှိသူများက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြရပြီး ကလေးငယ်ကို နေအိမ်ပြန်ပို့ပေးနိုင်ရန် လိပ်စာကို ကြိုးစား စစ်မေးနေကြသည်။ တာဝန်ရှိသူ။ ။ "" မင်းဘယ်လမ်းထဲမှာ နေသလဲ"" ကလေးငယ်။ ။ "" လမ်းထဲမှာ မနေပါဘူး၊ အိမ်ထဲမှာ နေပါတယ် "" ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားလိုက်လေသည်။ ကျိုးပျက်စရာဆိုလို့ မိခင်တစ်ဦးသည် ကောလိပ်တက်နေသော သားတော်မောင်ထံ သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ် ပို့ပေးလိုသည့်အတွက် စာတိုက်သို့ ရောက်လာသည်။ စာတိုက်စာရေးဖြစ်သူက ပေးပို့မယ့် ပါဆယ်ထုပ်ထဲမှာ ကျိုးပျက်စရာ ပါ မပါ မေးမြန်းသည်။ "" ကျိုးပျက်စရာဆိုလို့ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးပဲပါတယ်"" ဟု သူမက ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ ဒါဆို လိမ်တာပဲ သာလိကာကို သင်တန်းပေးပြီး စကားပြောသင်နေသူသည် သာလိကာအား "" ငါလမ်းလျှောက်တတ်တယ် "" ဟု သင်ပေးရာ သာလိကာက "" ငါလမ်းလျှောက်တတ်တယ်"" ဟု ပြန်ဖြေခဲ့သည်။ ဆရာ။ ။ "" ငါစကားပြောတတ်တယ် "" သာလိကာ။ ။ "" ငါစကားပြောတတ်တယ် "" ဆရာ။ ။ "" ငါပျံသန်းနိုင်တယ် "" သာလိကာ။ ။ "" ဒါဆိုလိမ်တာပဲ အတောင်ပံချိုးထားတယ် "" ဟု ပြန်ပြောခဲ့လေသည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုတည်း ကျန်လို့ပါ အမြန်ရထားဖြစ်သည့် အတွက် ဘူတာတိုင်းတွင် အချိန်ကြာကြာ မရပ်ပါ။ ကျွန်မသည် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ ကလေးငယ်တစ်ဦးအား "" အန်တီ့ကို ကူညီပြီး သကြားပလာတာနှစ်ချပ် ၀ယ်ပေးပါ၊ တစ်ချပ်က သားစာ၊ တစ်ချပ်ကို အန်ှတီ့ကို ပေးပါ "" ဟုပြောပြီး ငွေတစ်ဆယ်ပေးကာ ၀ယ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ကလေးငယ်သည် ပလာတာတစ်ချပ်ကို ကိုက်စားပြီး ကျွန်မအား ငွေငါးကျပ်ပြန်ပေးရင်း "" နောက်ဆုံးတစ်ချပ်တည်း ကျန်တယ် အန်တီရယ်"" ဟု ပြန်ပြောခဲ့သည်။ ငါ့တာဝန်ကျေပြီ စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှ ထွက်ခွါလာသော အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးသည် ငွေသိမ်းစာရေးအား ပြန်အမ်းငွေ မှားနေကြောင်း ပြန်လာပြောပြခဲ့သည်။ စာရေးကမူး "" ကောင်တာမှ မထွက်ခွါမီ စစ်ဆေးယူပါ၊ ကောင်တာမှ ထွက်ခွါပြီးနောက် မှားယွင်းမှုကို တာဝန်မယူ "" ဟူသော ဆိုင်းဘုတ်ကို ညွှန်ပြလိုက်သည်။ သည်တွင် အမျိုးသမီးကြီးမှ "" ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပဲ၊ ငါ့တာဝန်ကျေပြီ၊ ငွေငါးရာ ပိုအမ်းလိုက်တော့ ငါမုန့်ဝယ်စားရတာပေါ့ "" ဟု ပြောဆိုရေရွတ်လိုက်ပြီး ဆိုင်မှ ထွက်ခွါသွားလေသည်။ အရည်အချင်းတစ်ခု လူတစ်ယောက် သူ့သူငယ်ချင်းအား "" ငါဝန်ကြီးချုပ်နေရာ ၀င်အရွေးခံမလို့ကွ "" ဟု ဖွင့်ဟ ကြေညာလိုက်ရာ သူ့သူငယ်ချင်းက အံအားသင့်သွားပြီး "" မင်းရူးနေသလား "" ဟု မေးလိုက်၏။ သည်တော့ ထိုသူက "" ဘာလဲ၊ ရူးဖို့လိုလို့လား "" ဟု ပြန်ဖြေလိုက်၏။ အထင်မခံနိုင်ပေါင် ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းလာခဲ့သည့် အမျိုးသမီးကြီးက ဂရိရှေးဟောင်း ဘုရားကျောင်းပျက်ကြီး၏ ပြိုလဲကျနေသော တိုင်ကြီးများရှေ့တွင် ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံ၏။ "" ဓါတ်ပုံထဲမှာ ကားမပါစေနဲ့နော်၊ တော်ကြာ ယောက်ျားက ဒီနေရာကို ကျွန်မ၀င်တိုက်လိုက်တာလို့ ထင်သွားအုံးမယ် "" ဟု အချိန်မီကလေး သတိလှမ်းပေးလိုက်၏။ လစာမြင့်လို့ပါ လူကြီး။ ။ "" ဦးက ဒီနေရာနဲ့ စိမ်းနေလို့ပါကွယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီး အနီးဆုံးဘဏ်ကို မင်း ညွှန်နိုင်မလား"" ကလေးငယ်။ ။ "" ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ဆယ်ဒေါ်လာတော့ ပေးရမယ် "" လူကြီး။ ။ "" ဟ..များလှချေလားကွ....မင်း တောင်းတာ ... ကလေးငယ်။ .။ "" ဘဏ်ညွှန်ကြားရေးမှူးတွေဆိုတာ လစာမြင့်တယ်ဗျ.."" ဒီလိုပါ ဒီလိုပါ ခြံထဲတွင် ကစားနေသော ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ၏ လေးနှစ်အရွယ်သားငယ်လေးက သူ၏နားထဲသို့ ကျောက်ခဲဝင်သွားကြောင်း ပြောလေရာ မိတ်ဆွေသည် ထိုကျောက်ခဲကို ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် ကလေးအား ဆေးရုံသို့ အပြေးအလွှား ခေါ်သွားရလေသည်။ ဆရာဝန်က ထိုကျောက်ခဲအား ညင်သာချောမွေ့စွာ ထုတ်ယူပေးလိုက်ရာ "" ဘယ်လိုများ ဒီကျောက်ခဲ နားထဲ ၀င်သွားရတာလဲ "" ဟု ဆရာဝန်က ကလေးကို မေးလိုက်သည်။ "" ဒီလိုပါ "" ဆိုပြီး ကလေးငယ်က ကျောက်ခဲကို သူ၏ နားထဲသို့ ပြန်ပြီး ထိုးသွင်းပြလိုက်သည်။ သူသည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မေ့ဆေးပေးခံရပြန်တော့သည်။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 10:06pm
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:04 AM